100startups – mpandraharaha fito vaovao hotohanana – Blaogin'i Voniary
Rehefa vita ny fanombanana tamin’ny sabotsy 13 Aprily lasa teo dia mpandraharaha fito no voaray hisitraka ny fanampiana sy ny fanohanana avy amin’ny 100startups.
Ny fizotry ny fanombanana
Tamin’ny volana Novambra 2018 no nanatanteraka ny fanaikana tetikasa ny 100startups. Rehefa nandalo sivana ireo mpandraharaha nandefa ny antotan-taratasiny dia folo tamin’izy ireo no voafantina niatrika ity fanombanana dingana voalohany ity. Valo moa no tonga tamin’izany.
Nomena 10 minitra ny mpifaninana tsirairay mba hilazalazany momba ny tetikasany indrindra ny mampiavaka azy sy ny vinavinany.
Mpitsara matihanina, izay mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny fandraharahana, no nanatanteraka ny fanombanana. Ireto avy izy ireo : Prisca Ranaivoarison avy amin’ny Incubons, Eric Ravohitrarivo avy amin’ny Miarakap, Andry Ravololonjatovo avy amin’ny STEM4GOOD Madagascar, Hery Zo Andriamiarana sy Santatriniaina Razafindratsimba avy amin’ny YALI Alumni ary Clara Missoffe avy amin’ny Orange Fab Madagascar.
Fandraharahana : mila mitondra hevi-baovao lalandava
Anisany masontsivana nanombanana ireto mpifaninana ny fitondrana zava-baovao. Raha ireo tetikasa naseho tao dia azo lazaina fa mahafeno izay fepetra izay avokoa.
Vici : mamokatra vinaingitra avy amin’ny paoma tsy misy fangarony
Labell’o Vert : mamokatra fikarakarana tarehy sy volo avy amin’ny vokatra voajanahary
Tutoria : mampianatra ireo ankizy sahirana any am-pianarana amin’ny fomba miavaka
Mada Cucurbe : mamadika ny voatavo ho vovony
Futuro : manampy ny mpiasa sy ny mpitady asa amin’ny alalan’ny ivonkala
Safemad : mamokatra zezika avy amin’ny kankana
All Secure : miaro ny orinasa manoloana ireo loza mifandraika amin’ny informatika sy aterineto
Fresco : mivarotra voankazo sy legioma efa voakarakara
« Tsara avokoa ireo tetikasa ireo ary mendrika tohanana. Maro amin’izy ireo no vao izao mihitsy vao miditra amin’ny sehatry ny fandraharahana ka izany indrindra no tena anampian’ny 100startups azy ireo. »
Elodie Rabenivo, filohan’ny 100startups
Inona moa ny 100startups ?
Ny 100startups dia sehatra iray entina ampiroboroboana ny fandraharahana eto Madagasikara. Andiany faharoa ireto mpandraharaha raisina mandritra ny taona 2019 ireto izay ahitana tetikasa fito : Tutoria, Vici, Mada Cucurbe, Safemad, Fresco, All Secure ary Futuro.
Ireo mpitsara sy ireo mpandraharaha voafantina
Manomboka amin’ity volana ity dia hiatrika fiofanana izy ireo mba hanatevenany ny fahalalany mikasika ny fitantanana orinasa. Hisy ihany koa ny fitetezana orinasa ho fampiharana ny lesona azo.
Ankoatra ny fiofanana dia ahazoan’ireto mpandraharaha tombontsoa lavitr’ezaka ihany koa ny fidirany ao amin’ny 100startups. Afahany mampahafantatra bebe kokoa ny orinasany izany ary mampisokatra azy amin’ny fiaraha-miasa samihafa.
Amin’ny 25 Jolay dia hiatrika ny fanombanana farany ireto tanora mpandraharaha ireto. Ny dimy voafantina amin’izany dia hahazo mpitarika manokana ary famatsiam-bola.
100startups, famatsiam-bola, fampiroboroboana ny fandraharahana, fandraharahana, mpandraharaha malagasy, tetikasa